Clarity: Heatmaps maimaim-poana sy firaketana an-tsoratra ho an'ny fanatsarana ny tranokala | Martech Zone
Rehefa namolavola sy namolavola lohahevitra Shopify mahazatra ho anay izahay fivarotana akanjo an-tserasera, te-hiantoka izahay fa nanamboatra tranokala e-varotra kanto sy tsotra izay tsy mampisafotofoto na manafoana ny mpanjifany. Ohatra iray amin'ny fitsapana ny famolavolanay dia a fanazavana fanampiny block izay nanana antsipiriany fanampiny momba ny vokatra. Raha namoaka ilay fizarana ao amin'ny faritra mahazatra izahay, dia hampidina be ny vidiny ary ampidirina amin'ny bokotra sarety. Na izany aza, raha namoaka ny fampahalalana etsy ambany izahay, dia mety ho diso ny mpitsidika fa misy antsipiriany fanampiny.
Nanapa-kevitra ny hanao fizarana toggle nomena anarana tsara izahay Fanazavana fanampiny. Na izany aza, rehefa namoaka azy tao amin'ny tranokala izahay, dia nahatsikaritra avy hatrany fa tsy manindry ny fizarana ny mpitsidika mba hanitarana azy. Somary saro-pantarina ny fanamboarana… famantarana kely eo akaikin'ny lohatenin'ny fizarana. Rehefa nampiharina izany, dia nijery ny sari-tany mafana izahay ary nahita fa maro ny mpitsidika nifanerasera tamin'ny toggle.
Raha tsy nandrakitra fotoam-pivoriana sy namokatra heatmaps izahay, dia tsy ho afaka hamantatra ny olana na nanandrana ny vahaolana. Ilaina ny fametahana hafanana rehefa mamolavola karazana tranokala, tranokala e-varotra, na fampiharana ianao. Izany hoe, mety ho lafo be ny vahaolana amin'ny heatmapping. Ny ankamaroany dia mifototra amin'ny isan'ny mpitsidika na fivoriana tianao hojerena na horaketinao.
Soa ihany fa manana vahaolana maimaim-poana ny goavambe iray ao amin'ny indostriantsika. Microsoft Clarity. Ampidiro fotsiny ny kaody fanaraha-maso Clarity ao amin'ny tranokalanao na amin'ny alàlan'ny sehatra Tag Management anao dia mandeha ao anatin'ny ora maro ianao rehefa voasambotra ny session. Na tsara kokoa aza, manana fampidirana Google Analytics ny Clarity… mametraka rohy mety amin'ny playback session ao anatin'ny dashboard Google Analytics! Clarity dia mamorona refy mahazatra antsoina hoe ny URL Playback mazava miaraka amin'ny ampahany amin'ny fijerena pejy. Fanamarihana sisiny… amin'izao fotoana izao dia afaka manampy fananana tranonkala iray ihany ianao mba hampidirana amin'ny Clarity.
Microsoft Clarity dia manome ireto endri-javatra manaraka ireto…
Sarintany mafana avy hatrany
Mamorona sarintany hafanana ho azy ho an'ny pejinao rehetra. Jereo hoe aiza no kitihin'ny olona, ​​inona no tsininy, ary hatraiza ny halaviran'izy ireo.
Jereo ny fomba fampiasan'ny olona ny tranokalanao miaraka amin'ny fandraketam-peo. Diniho izay miasa, ianaro izay tokony hatsaraina, ary andramo hevitra vaovao.
Insights sy Segments
Fantaro haingana hoe aiza no mahasorena ny mpampiasa ary avadiho ho fahafahana ireo olana ireo.
Ny Clarity dia GDPR sy CCPA vonona, tsy mampiasa santionany, ary miorina amin'ny loharano misokatra. Ny tsara indrindra dia hankafizanao ny endri-javatra rehetra an'ny Clarity amin'ny vidiny tsy misy vidiny. Tsy ho tratran'ny fetran'ny fifamoivoizana mihitsy ianao na terena hanavao ny dikan-karama… maimaimpoana mandrakizay izany!
Misoratra anarana amin'ny Microsoft Clarity
Tags: mazavafanatsarana ny ecommercemicrosoft mazavafiraketana fivorianafanatsarana ny tranokalafitilianatranonkala fanatsarana